Faalo: Suxufigu xor uma ah in uu ka shaqeeyo Duminta Dalkiisa iyo Tabinta Warar Xasaro Keeni Kara. – Puntland Voice
Articles, Dhacdooyinka Puntland, News
Faalo: Suxufigu xor uma ah in uu ka shaqeeyo Duminta Dalkiisa iyo Tabinta Warar Xasaro Keeni Kara.
June 25, 2016 9:06 am Views: 124
Saxaafadu Waa Seef labo Afle ah oo dhanka Fiicana wax u jarta dhanka xuna wax u jarta waxaana loobaahanyahay in Saxaafada ay wax u jarto dhanka San.
Saxaafada hormartay Ee Dunida Ayaa Baahintooda Wareed iyo barnaamijyo u isticmaala Qaab Wanaagsan oo Bulshadu ay ku qanci Karto.
Saxafiga waa in uu Dhowraa Sharfata Diintiisa iyo Dalkiisa islamarkaasina uu san soo gudbin ama aanu soo bandhigin waxyaabo dhibaato u keeni kara shacabka.
Intaasi oo ah hordhaca Faaladeeyda iminkana waxaan ugada galayaa micnaha iyo u jeedka faaladeeyda.
Saxaafada Puntland ayaa ku doodeeysa in la caburiyay ama awaamiir lagu soo rogay.(Layaab)
Saxaafada waa Isha bulshada u soo bandhigta warar xaqiiq ah oo shacabka aan dhibaato u geeysaneeynin haddii saxafigu uu soo bandhigaa Warar dhibaato iyo qal qal amni galin karta shacabka lama dhehi karo waa saxafi .
Micnaha Madaxbanaani iyo Xor oo Dad badan oo saaxiibadeey ah ay ku hadaaqaan markii laga hor yimaado Dhibaatooyin ay bulshada u geeysanayaan Ayaan jeclaan lahaa in aan wax I raahdo.
Wariyuhu iyo qofkasta xor u ma ahan soo gudbinta warar dhib keenaya xornimaduna ma ahan in aad Dhib keento .
Wasaarada Warfaafinta Sida Magacaba Aad ka dheehan karto iyada ayaa masuul ka ah Warbaahinta iyada ayaa soo saarta shuruuxda Warbaahinta waana masuuliyad saaran la socodka xaaladaha wariyaasha dhankastaba ha noqotee.
Waxaa Nasiib Daro Ah Dad badan oo aan arkay in ay leeyihiin Wasaarada kama hadli karto Arimahaasi.
Fiiri Wadamada hormaray waxaa la soo saaraa shuruuc si deg deg ah ayeey wariyaasha u qaataan .
Dowlada Ama Maamulka Xiliga halkaasi ka jira ayeey masuuliyad ka saarantahay in ay ilaaliyaan Amniga halka ay masuulka ka yihiin kawaran haddii ay wariyaashii abuurayaan Xasilooni daro ?
Wariyaasha Puntland ayaa Nabad ku naalooda iyaga oo aan cabsi ku jirin ayeey Magaalooyinka Waaweeyn Ee Puntland iska Maraan Yaa keenay Amnigaasi Miyaanay Dowlada Aheyn ilaaheey ka sagoow.
Wariyaasha waa in ay raacaan Awaamiirta Dowlada islamarkaasina ay kala shaqeeyaan kana hortagaan Wax kasta oo dhibaato u keenaya Diinta , dalka , dowladnimada iyo Amniga Ogoowna Wariyaha Ama Saxaafada kama weeyna Sharciga.
W/D: Puntland Voice Team